2.1 Qaababka loo soo uruuriyo xogta iyo wararka
Marka la soo uruurinaayo xog iyo macluumaad loona qaabeeynayo tirakoob ahaan ayaa la adeegsadaa lana raacaa waddooyin kala duwan
Qaababka ugu caansan ee caadiyan loo isticmaalo soo uruurinta xogta iyo macluumaadka waa iyadoo la sameeynayo baaritaano lagu soo bandhigayo qaab qoraal ah oo laga jawaabayo su'aalo, wareeysiyo toos loo sameeynayo ama ukuurgelitaan muddo socday. Waqtigan casiriga ah waxaa la adeegsadaa habab ku shaqeeya kombiyuutarka sida tusaale ahaan marka aad wax ku iibsato adigoo isticmaalaya kaarka lagu adeegto ayaad waxaad arkeysaa xogta wax iibsigaaga.
Waa wax caadi ah in aqoonyahannada wax baara ay u adeegsadaan hawlahooda cilmi baaris, haddaba hababkaas aan soo sheegnay kuwooda ugu muhiimsana waxaa ka mid ah:
Waxaa lagu soo bandhigaa qaab su'aalo la soo kala dhigdhigay. Waa hubaal inaad mar uun ka jawaabtay xogwaran. Xogwaran waxa uu ka kooban yahay su'aalo dhawr ah oo la doonayo in laga jawaabo, waxaan tusaale u soo qaadan karnaa xogwaran ku saabsan hurddadaada iyo cuntadaada.
Qof wareysiga kaa qaada ayaa ku weydiiyo su'aalo isla markaana qorta jawaabtaada. Wareysiga waxaa uu noqon karaa mid lays weydiiyo su'aalo kooban, oo horey laguu sii ogeeysiiyey ama waa su'aalo furan oo ka imaan kara wareysiga marka lagula yeelanaayo.
Qofka wax baaraayo waxaa uu eegaa waxa dhacaaya, sida ay u dhacayaan iyo waqtiga ay dhacdadu soconayso. Waxaa la qoraa marka ay dhacdadu soconayso iyo markay dhamaato kadib.
Waxaa la uruurin karaa xaqiiqda/tirokoob iyadoo la sameeynayo daraasado cilmibaaris oo ku saabsan buugaagta ka hadlaaya suugaan.
Waxaa loola jeedaa in la raadiyo wax alla wixii horey looga qoray maaddadaas la baaraayo ka dibna meel lagu soo uruuriyo iyadoo la soo koobaayo.